I-Anatomy yeebhaluni zezilwanyana zikaJason Freeny | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ngokuqinisekileyo kwimibhiyozo yemihla yokuzalwa okanye xa ubani esiya nosapho kwenye yezo ndawo zokuthenga ezi Iibhaluni ezimilise izilwanyana Bahlala benqweneleka kwelona lincinci endlwini. Indlela elula yokumela zonke iintlobo zezilwanyana kumaqela ophilayo kwaye ikwasebenza nalo mzobi ukuba sinemigca yokusithathela ubume bezilwanyana ngendlela engaqhelekanga yokuzimela.
Kananjalo ukuba olu hlobo lwesilwanyana kwiibhaluni lunokukukhumbuza ngobuntwana bakho. Kulapho uJason Freeny ajikele khona onakalise la maphupha amnandi ukusukela xa wawuneminyaka nje embalwa ubudala xa wawutyhila i-anatomy enokufumaneka kwelo dada lerabha okanye ezinye zezilwanyana ozithandayo zabantwana abaninzi. Kwaye nguFreeny, ngaphambili, obenobuganga bokusibonisa ngaphakathi kwezo zinto zokudlala zerabha ebezihamba nathi kulaa minyaka xa ilizwe lalibonakala lifezekile.
UJason usizisela iibhaluni ezimile okwezilwanyana ukunika ezi "zinto zokudlala" ukujija. UFreeny kwaye ungumculi waseMelika oqale njengomfundi oyilo loyilo kwaye ngaloo minyaka ebesebenzela mtv, Wenza imifanekiso yedijithali kwaye ngaxa lithile waqalisa umsebenzi njengomyili wezinto zokudlala. Oku kukhokelele kumxube onamandla wokudibana nezi zilwanyana zizithathela ngokwazo into eyiyo yokwenyani enje ngomzimba "wezinto eziphilayo".
Ngokuka-Freeny, kumthathe malunga neminyaka eli-10 Fumana ezo zinto zokudlala zenziwe ngobuninzi, ke ngoku ungazithenga kwiAmazon, ibhere nenja ubuncinci.
Unayo ifayile ye- iphepha kwiAmazon ukuzifumana kule khonkco, facebook wakho y I-instagram yakhe. un umsebenzi ongaqhelekanga nowahlukileyo ekugqibeleni ifumene isiqhamo sayo ukuba ikwazi ukuyithengisa kwihlabathi liphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » I-Anatomy yeebhaluni zezilwanyana ezingafunyanwanga nguJason Freeny
Imifanekiso yeepeni kwiimephu zeediliya, iileta kunye neemvulophu nguMark Powell